VC-IP kuyinto uwoyela encibilikayo vitamin C esuselwe. Isebenza njengoba antioxidant enamandla futhi mhlophe ejenti, kokubili anti-induna kanye anti-ukuguga amakhono. Njengezinye izinhlobo vitamin C, VC-IP kusiza ukuvimbela sokuguga kwamangqamuzana ngu ezivimbela cross-ukuxhumanisa collagen, namachibi amaprotheni, futhi lipid peroxidation. VC-IP futhi isebenza synergistically ne antioxidant Vitamin E, futhi uze wabonisa aphakeme ukumuncwa percutaneous nokuzinza. izifundo eziningi iye yaqinisekisa isikhumba siphungule, isithombe ...
Igama lomkhiqizo: Ascorbyl Tetraisopalmitate
Yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali :: 97% imiz
Formula Yamamolekhula: C70H128O10
VC-IP kuyinto uwoyela encibilikayo vitamin C esuselwe. Isebenza njengoba antioxidant enamandla futhi mhlophe ejenti, kokubili anti-induna kanye anti-ukuguga amakhono. Njengezinye izinhlobo vitamin C, VC-IP kusiza ukuvimbela sokuguga kwamangqamuzana ngu ezivimbela cross-ukuxhumanisa collagen, namachibi amaprotheni, futhi lipid peroxidation. VC-IP futhi isebenza synergistically ne antioxidant Vitamin E, futhi uze wabonisa aphakeme ukumuncwa percutaneous nokuzinza. Izifundo eziningi iye yaqinisekisa siphungule isikhumba, isithombe-avikelayo, futhi imiphumela hydrating VC-IP ungaba esikhumbeni. VC-IP ingatholakala imikhiqizo ehlukahlukene ukunakekelwa kwesikhumba ezifana anti-ukuguga serums, iso ukwelashwa, isikhumba siphungule si kanye lotions / okhilimu.
INCI igama: Ascorbyl Tetraisopalmitate
Ukubukeka: kungenambala ukukhanya yellow, okusobala ketshezi
iphunga: Iya kancane isici iphunga
Previous: U-vitamin C Tetraisopalmitate
ascorbyl tetraisopalmitate ukuthenga
ascorbyl tetraisopalmitate abahlinzeki
VC-ip igama inci